← गोरखकाली रवर उद्योग बन्द
के हो साउने संक्रान्ति ? →
परदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेशको खबर
साथीहरू, तपाइंहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यहां तपाईहरूलाई आफ्नो शिर ठाडो गरेर हिंड्ने अवस्था छ, छैन मलाई थाहा छैन । तर यहां हामी आफ्नै देशका सडक र गल्लीहरूमा शिर ठाडो पारेर हिंड्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुंदैछ । नेपाली भूमिमा छिमेकि भारतका सेना पुलिस विना अनुमति पस्छन्, हाम्रो भूमिबाट हामीलाई नै लखेट्छन् । हाम्रा अन्नपात र धनदौलत लुट्छन्, त्यतिमात्र हो र ? हाम्रा दिदीबहिनी र छोरीचेलीको अस्मिता समेत लुट्छन् हाम्रै सामु । यो भन्दा दर्दनाक पीडा के हुन सक्छ ? यस्तो बेला हाम्रो देशको राष्ट्रपति तिनै विदेशी प्रभुको इशारामा सैनिक सर्वोच्चता लादेर शितलनिवासमा निर्लज्ज बसिरहेछन् । वालुवाटारमा तिनै विदेशीको कठपुतली वनेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढसमस्स बसेका छन् । सम्झनुहोस् त साथीहरू, यतिबेला हामीहरू कस्तो बेचैन अवस्थामा बांचिरहका छों होला ? तपाइंहरूले पनि त यो सबै थाहा पाइराख्नु भएको छ नि । तपाईहरूलाई चाहिं कस्तो भइरहेछ ? साथीहरू, एक्काइसौं शताब्दीको यो दुनियांमा दस वर्ष जनयुद्ध र १९ दिन ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर्ने महान् नेपाली जनतालाई बेबकुफ र मुर्ख ठान्दै स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यतिबेला हामी नेपालीको नागरिक सर्वोच्चतामाथि खेलवाड गरेका छन् । दसदस वर्षसम्म नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली शोषित-पीडित जनताको एकमात्र भरोसाको केन्द्र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई घेरामा पारेर स्वाधीन र समुन्नत गणतन्त्रात्मक नयां नेपाल बनाउने अग्रगामी यात्रालाई रोक्ने कुचेष्टामा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू भयङ्कर षडयन्त्र गरिरहेका छन् यतिबेला । साथीहरू, हरियो घांसमा लुकेको विषालु सर्प बनेर जनतालाई झुक्काएर टोक्ने नेकपा-एमाले नामको समूह पुनः फंडा उचालिरहेको छ । राजतन्त्रको पछिल्लो प्रतिनिधि रुक्माङ्गत कटवाल नामको पात्रलाई अगाडि सारेर नेपाली काङ्ग्रेस नामको भारतीय दलालले नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली जनताको नागरिक सर्वोच्चताको हकमाथि एकैसाथ प्रहार गरिरहेको छ। अहिले अन्तरिम संविधानलाई कागजको खोस्टो समान बनाइएको छ । १५ हजार जनताको सहादतबाट स्थापित संविधानसभालाई बेकम्मा बनाइएको छ । राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आसिन रामवरण यादवलाई गोटी बनाएर देशद्रोही प्रतिगामीहरूले नागरिक सर्वोच्चतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरे । यस’boutमा संविधानसभामा छलफलसम्म गर्न नपाइने जस्तो अत्यन्त निकृष्ट कार्यलाई स्वागत गरेर यो देशका तथाकथित बुद्धिजीवी, कानुनविद र ठूला मिडियाहरूले आफ्नो सक्कली चरित्रको पर्दाफास गरेका छन् । यो भन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ, होइन र ? यी सबै खबर तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नु भयो नि। साथीहरू, नेपाली जनताले आफ्ना शत्रुलाई राम्ररी चिन्ने मौका पाएका छन् अहिले । यहांका पार्टीहरू यहांका तथाकथित बुद्धिजीवी र मिडिया हाउसहरू, सबै जनताका शत्रु र मित्रहरू दुवैको पहिचान भइसकेको छ यतिबेला । यसर्थ, अब चांडै नेपाली जनताहरू नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताका लागि एउटा निर्णायक विद्रोह गर्दैछन् । यो सुखद खबर चाहिं तपाईंहरूले थाहा पाउनुभएको छ/छैन कुन्नि ? यही खबर तपाईंहरूलाई पठाउंदै छु । त्यताको खबर पनि पाउं है ?